..::Sql poizon v1.1 tutorial::.. | Shwekoyantaw
Published : 5:02 AM Author : shwekoyantaw
sql poizon ကို သုံးပြီး sql vulnerable website တွေကို ရှာသွားပါမယ်...ပထမဦးဆုံး sql poizon ကို ဒီအောက်က link လေးမှာ download ဆွဲပါ...အဲထဲမှာ sql vulnerability links တွေအများကြီးပါပြီးသားဗျ...ယူဆွဲရုံပဲ...ဒါပေမယ့် sql poizon သုံးနည်းကိုလည်း သိထားသင့်ကြတယ် ထင်လို့-------------
ဆေးထိုးအပ်ပုံကြီးနဲ့ sql poizon ကို run လိုက်ပါ...ဒီလိုမျိုးလေးမြင်ရမယ် ဟုတ်တယ် ဟုတ်??
all dorks ဆိုတာလေးနားက + လေးကို click ပြီးတော့ dork ရွေးပေးရပါမယ်...ကျွန်တော် php dork ထဲကတစ်ခုကို ရွေးထားပါတယ်...ရွေးပြီးရင် scan ကို နှိပ်ပါ...ဒီအောက်ကပုံလေးအတိုင်းပဲ result တွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်...
အိုကေ....အခု scan ပြီးသွားရင် ဒီထွက်လာတဲ့ကောင်တွေကို sql crawler ထဲထည့်ဖို့လိုတယ်ဗျ... right click ထောက်ပြီး send to sql crawler ကိုရွေးပါ...all ကို ရွေးပါ...
ကဲ...sql crawler tab ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်...အဲ website တွေဟာ တကယ် vulnerability ဖြစ်မဖြစ် သိဖို့အတွက် crawl ကို နှိပ်ပါ...
Vulnerability Links တွေထွက်လာပါပြီ...Export Results ကို နှိပ်ပြီး တော်သင့်ရာနေရာမှာ save ထားလိုက်တော့ပေါ့ဗျာ...နောက်မှ အားရင် အားသလို Injection ပေါ့....
Not for pro...Just for n00bs,dummies.
post by hacker 1989
Labels: SQL Injection, tools, tutorial |